LIISKA Antonov AN-32 FSX - Rikoooo
downloads 35 627
Tim Piglet Conrad - Diyaaradaha Piglet Peculiar. Waxaa cusboneysiiyay Bob Chicilo
aad u fiican add-on hooyo u ah FSX-SP2 (iyo Prepar3D v4 + ku habboon) oo tayo sare leh, shaqo wanaagsan.
Waxaa ku jira afar weji-dameedka, dhawaqyada caadada u ah, roogaga wareega (VC) oo lagu daray qolka, suurtagalnimada furitaanka xamuulka dambe (Ctrl + E), aqri buugga.
The An-32 asal ahaan waa dib-u-engined An-26 ah. macaamiisha bilaabay waxa uu ahaa Air Force India, kaas oo amray in diyaaradaha this qayb ahaan sabab u tahay xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya markaas hogaamiyaha USSR Leonid Brezhnev dibna hogaamiyaha Hindiya Indira Gandhi. The An-32 waxaa loogu talagalay in u adkeysan xaaladaha loo kasin weather ka khayr badan heerka An-26. meelaynta sare ee nacelles ku engine ku xusan garabka oggol yahay rafaasad dhexroor weyn, kuwaas oo loo kala eryay by matoorada turboprop AI-5100 20 hp qiimeeyo, ku dhowaad awood jeer ee powerplants AI-26 the-An 24 ee. Haddaba An-32 jecel yahay sifooyinka qaadataan-off fiican ku hoos jira xaalad kulaylaha iyo buuraleyda (-sare sare), halkaas oo hawada kulul ama khafiif horjoogsadeen powerplants dadaalka tractive. Qiimaha cusub ka dhisay An-32 ayaa laga soo xigtay isagoo 6-9 million dollars in 2000
Qore: Tim Piglet Conrad - Diyaaradaha Piglet Peculiar. Waxaa cusboneysiiyay Bob Chicilo